👑I-Luxury MarinaSuite👑Ukubuka kwephuli🏊‍♂I-Strait Quay - I-Airbnb
👑I-Luxury MarinaSuite👑Ukubuka kwephuli🏊‍♂I-Strait Quay
Strait Quay, Pinang, i-Malaysia
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-ThreeBirds
Uyemukelwa endaweni yokuqala futhi okuwukuphela kwayo okudayisa olwandle e-Penang. Ukuzijabulisa, ukudla kanye nemikhosi ngasolwandle. Lokho ukuhleleka kosuku e-Straits Quay, indawo entsha okufanele uyivakashele esiqhingini esimangalisayo sase-Malaysian Penang. I-Luxury Marina Suites elungele i-Small Family 2-4 pax enobumfihlo obuphezulu, enokuthula, indawo ewubukhazikhazi kanye nenani elithengekayo. Indawo enhle, ukudla okuhle, abantu abalungile futhi okubaluleke kakhulu izinga lethu lamakamelo eliphansi ongeke uphuthelwe. Hlala endaweni yethu!
# Iwukhiye wokuziqoqa ebhokisini lezincwadi bese uhlola eyakho. Kulula futhi kuwusizo!
!!! IZINTO OKUMELE UZIQAPHELE ngesikhathi se-MCO !!!
Yilabo abagonywa imithamo emi-2 kuphela abatholakalayo ukuze bahlolwe KUPHELA!!
(Ukuhlangana Komngane kuvunyelwe ukuze wenze isiqiniseko sokuthi indawo ihlanzekile futhi icocekile ngaphambi kokuphuma, Imali Yokuhlanza ikhokhwa okokuhlanza Ukuhlanza Okuncane kuphela)
I-Suite esanda kufakwa (I-Facing Swimming Pool) enamalungiselelo alandelayo:
Igumbi lokulala elikhulu:
- 1 Kingsize umbhede womuntu 2.
- Side Single bed
- 2 Umbhede Osofa Oyedwa
- Izingubo zokugqoka
- Indlu yokugezela iza kubhavu
- I-WIFI iyatholakala
- Isiteshi se-Astro siyatholakala! (isiteshi se-astro esiyisisekelo)
- yokugezela Common
- Indawo yokuhlala ebanzi
- I-balcony evulekile
- Ikhishi elinesethi ephelele
- Itafula lebha
- I-TV, umshini wokuwasha nesiqandisi
* Siphinde futhi sinikeze i-Airport Shuttle Service nganoma yisiphi isikhathi NGEZINDLULO EZINGAPHANSI kakhulu.
* Siphinde futhi sinikeze isevisi yokuvakasha kweDolobha eDolobheni
4.55 · 121 okushiwo abanye
IStrait Quay Marina indawo lapho wonke ama-yacht ama khona futhi atholakala phakathi kwamabhishi e-Batu Ferringhi kanye nokuphithizela kwe-Gurney Drive, i-Straits quay iyingxenye yentuthuko ehlelwe kahle esezingeni lomhlaba ye-Seri Tanjung Pinang. Le ndawo ehlukile itholakala kalula ngaphakathi kwe-marina yayo yokudayisa, inkundla yokudlala iStraits Green ngase-sea® kanye neTesco.
Iphinde ixhunywe kahle ngemigwaqo yokufinyelela enamasu ezindaweni eziningi ezihlanganisa izikole, izikhungo zezokwelapha kanye nenxanxathela yezitolo.
Ukunikeza ukhiye noma ukuzihlolela kuyatholakala ngokuya ngokuthanda kwesivakashi, siyatholakala ocingweni noma ku-WhatsApp / WeChat imilayezo nganoma yisiphi isikhathi futhi sizoxazulula izinkinga zesivakashi ngokusemandleni ethu. Ngethemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala!
Ukunikeza ukhiye noma ukuzihlolela kuyatholakala ngokuya ngokuthanda kwesivakashi, siyatholakala ocingweni noma ku-WhatsApp / WeChat imilayezo nganoma yisiphi isikhathi futhi sizox…
Hlola ezinye izinketho ezise- Strait Quay namaphethelo